Marin-u-helidda Caddaaladda, (Axdiga Dacwoodayaasha) | Maankaab.com
Helitaanka iyo marin-u-helka caddaaladdu waa isir biyo-kama-dhacaan u ah nidaam kasta oo dimoqraaddi ah, Somalilandna waxa baahi badan loo qabaa ku baraarugsanaanta arrintaas, barashada shuruucda, garashada iyo ku kalsoonida hay’adaha ku lug yeesha ee ka shaqeeya.
Somaliland, waxa ka jira saddex nidaam oo shaqeeya, saamayna ku yeesha nolosha muwaadiniinta.
• Nidaamka garsoorka ee tooska ah
• Xeerarka dhaqanka iyo hiddaha
Cilmibaadhis ay sannadkii 2011 samaysay hay’adda Qaramada Midoobey u qaabbilsan la-dagaallanka mukhaaddaraadka iyo dembiyada (UNODC), ayaa iftiimisay in xeer-dhaqameedka ay dadka intiisa badani door-bidaan, waayo waxa uu ku dhisan yahay xigmadda odayaasha oo dadka intiisa badani u arkaan, iyaguna (odayaasha) isku arka, in ay yihiin kuwa ugu habboon ee wax ka qaban kara dacwado fara badan oo ku saabsan dhinacyada dembiyada ciqaabeed iyo kuwa madaniga ahba.
Cilmibaadhistaas waxa lagu ogaadey in nidaamkani saamaynta ugu adag uu ku yeeshay xubnaha bulshada ugu nugul sida haweenka, carruurta iyo dadka barakacayaasha ah. Tusaale ahaan kufsiga oo kale, waxa uu xeerka dhaqanku jideeyaa in inta badan in ninkii inanta dembiga weyn ka galay aan loo arag sidaas ee iyadii loo guuriyo ama xaal iwm. laga qaato, natiijada soo baxdaana ay noqoto tacaddigaas.
Warbixinta UNODC ee 2011, waxa ay lafo-gurtay qaybta garsoorka dembiyada ee Somaliland. Cilmibaadhistu waxa ay xustay in nidaamka tooska ah ee garsoorku oo sooyaal ahaan soo jirey tan iyo xilligii gumeysiga uu yahay mid aan dadka intiisa badani aqoon u lahayn amaba aanay aqoonsanayn.
Sidaas awgeed, sida ay muujinayso warbixintu, waxa jirta baahi ballaadhan oo loo qabo in la sameeyo wacyi-gelin ku saabsan nidaamka garsoorka iyo sixitaanka natiijooyinka sinnaan la’aanta ee bulshada. Marka ay timaaddo dedaallada dib loogu habaynayo garsoorka Somaliland, waxa ugu mudan tallaabooyinka la qaadi karo in wacyi-gelin fidsan la sameeyo, iyada oo la adeegsanayo warbaahinta kala duwan.
Sida cilmibaadhistuba ka marag-kacday, waxa Somaliland ka jira hay’ado badan oo bixiya kaalmooyin dhinaca sharciga ah, hase yeeshee mid ka mid ah goldaloollooyinka ugu waaweyni waa jiritaan la’aanta qoraallo ay u adeegsan karaan wax-baridda bulshada guud.
Innaga oo ka shiidaal qaadanayna arrimahan iyo qiritaanka in dhawr nidaam ka shaqeeyaan Somaliland, ayaa haddana, waxa dhab ah in axdiga dacwoodayaasha iyo marinkiisuba uu ku salaysan yahay nidaamka garsoorka tooska ah (caadiga ah).
Qoraallo dhawr ah oo kani u horreeyo, waxa loogu talo galay in bulshada lagu dareensiiyo sida uu nidaamka garsoorka Somaliland u shaqeeyo. Axdigu waxa uu bixinayaa xog ah heerka ugu hooseeya ee adeeg-bixineed, kaas oo ay tahay in la siiyo cid kasta oo ay hawli ka gasho nidaanka garsoorka waddanka. Waxa uu axdigu kulmiyaa xuquuqaha iyo waajibaadyada la xidhiidha adeegyada ku habboon dhibbanayaasha iyo kuwa xadgudubyada sameeya, hase yeeshee kama hadlo habka dacwadaha madaniga ah.
Xafiiska Warbaahinta ee Wasaaradda Caddaaladda JSL.